PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-05 - Ukomphela ukhathazekile ngoshabba noparker
Ukomphela ukhathazekile ngoshabba noparker
Ufuna ukubavikela engozini ebakhokhobelayo
USTEVE “Mphathi” Komphela ongumqeqeshi wekaizer Chiefs ufuna ukuzama ukuvikela abadlali bakhe asebekhulile njengoba ebabona besengozini yokulimala isikhathi eside.
Ichiefs izobhekana nechippa United kwi-quarter final yetelkom Knockout namuhla ngesonto ngo-15h30 enelson Mandela Bay Stadium, ebhayi. La makilabhu atholana kulo mdlalo nje, asefomini njengoba evunywa yimiphumela. Womabili sekunesikhathi eside egcine ukuthola induku.
Ukomphela uthi unovalo ngoBernard Parker benosiphiwe “Shabba” Tshabalala njengoba sebegijime imidlalo eminingi ngaphandle kokuphumula kanti sebekhulile.
“Sekuqala ukuba nzinyana kubona manje njengoba imilenze yabo isithwale imidlalo eminingi ilandelana. Kuzofanele sikuqinisekise kulo mdlalo ukuthi kasiyi nangengozi esikhathini esengeziwe ngoba bazokuba nenkinga. Uma usukhulile nokulimala kuvele kuphuze ukuphola.
“Ngakho kuzofanele ngizame ngazo zonke izindlela ukubavikela. Silindele umdlalo onzima kwiChippa futhi inokuzethemba njengoba isanda kuhlula ibidvest Wits ngo-2-0. Kodwa-ke ngumdlalo wenkomishi lona kasikwazi ukwenza iphutha, kufanele siwunqobe noma kanjani,” kusho ukomphela.
Utebogo “Tebza” Moloi ocija ichippa, uthi ubadonse ngendlebe abadlali bakhe ngobungozi bokuzikhukhumeza.
“Sesibhekene nomunye umdlalo manje esikwenze kwiwits sekuwumlando. Ngiyazi-ke ukuthi abadlali bavamise ukuzikhukhumeza uma beke bashaya ikilabhu enkulu bavele bazibone bengahlula noma ngubani. Ngibaxwayisile ngobungozi esingase sihlangabezane nabo uma sizokuya ngalowo mqondo kwichiefs. Ichiefs isefomini kulezi zinsuku kuzofanele siyigade uma sifuna ukuyehlula,” kusho umoloi.
NGUBERNARD Parker ongumgadli wekaizer Chiefs ovuke emaqandeni muva nje, kanti umqeqeshi uthi kuzomele abalawule kahle ukuze agweme ukulimala kwabo benosiphiwe Tshabalala.